14825 पटक पढिएको
६ जेठ, चितवन । हात्तीसारका माहुत विनोद चौधरीले त्रित… सिटी बजाए । लक्ष्मण थुचुक्क बस्यो । अर्काे सिटीमा सुत्यो, अर्काे सिटीमा कोल्टे प¥यो । चौथो सिटीमा पेट उचालेर घुँडा टेकेर बस्यो । यसरी बस्दा हौदा कस्न सजिलो हुन्छ ।
ओई ! लक्ष्मण यता आइज । पर भएको लक्ष्मण खुरुखुरु आयो । अडी ! टक्क अडियो । पछाडि जा ! पछाडी फर्कियो । जा.. माला लगाई दे भन्दा माला टपक्क टिपेर मान्छेको गलामा पहि¥याइदिन पुग्छ । टाउकोमा सुँड राखेर आशिर्वाद दिन्छ ।
“चारवटा खुट्टा भएको जनावर दुई खुट्टामा बस्न सक्छ कि सक्तैन भनेर हेरियो त्यो पनि सक्यो,” माहुत चौधरीले भन्नुभयो ।
दायाँबायाँ जा भन्दा जाने, बस भन्दा बस्ने । उभी भन्दा उभिने गर्छ । “यसले नेपाली भाषा चाहीँ प्रष्ट बुझ्छ,” चौधरीले थप्नुभयो – “यहाँको थारु भाषा पनि बुझ्छ ।”
उहाँका अनुसार यसरी नेपाली भाषा बुझ्ने हात्ती नेपाल मै पहिलो हो । सामान्यतः नेपालमा पालिएका अन्य हात्ती यस्तो गर्दैन ।
यसरी अतिरिक्त कला देखाउने हात्ती पनि नेपालमा पहिलो हो । “फरक कला देखाएको छ लक्ष्मणले,” निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत अभिनय पाठक भन्नुहुन्छ ।
“भाले हात्ती हो, पछिसम्म यस्तै गरिरहन्छ या गर्दैन भन्न सकिन्न, हेरौं टिनएज लागेपछि के गर्छ,” विनोदले शंका व्यक्त गर्नुभयो । प्रायः भाले हात्ती जतिसुकै ज्ञानी भएपनि मात चढ्दा पारा देखाइहाल्छ भन्ने उनको अनुभव छ ।
हात्तीलाई सिकाउन अगाडि पहिले माहुत आफैंले सिक्नुपर्छ । आज एउटा सिकाउने अनि भोलि अर्काे गर्न लगाउँदा जान्दैन । आज सिकाएको शैलीमा भोलि गर्न लगाउँदा सजिलै गर्छ । ऊसँग कुर्सीमा चारवटै खुट्टा राखेर चढ्न र अडिन सक्ने क्षमता छ ।
‘आफू कन्फ्यूज भयो भने हात्ती नै कन्फ्यूज हुन्छ, आफू पोख्त हुनुपर्छ, हात्तीपनि पोख्त हुन्छ, जे होस् यिनीहरुको मन मस्तिष्कमा चाहीँ बस्दो र’ैछ,” विनोदले अनुभव सुनाउनुभयो ।
निकुञ्जका सूचना अधिकारी नुरेन्द्र अर्याल भन्नुहुन्छ, “कर्मचारीहरुले आन्तरिक रुपमा के सम्म गर्दाे रहेछ भनेर सिकाएका रहेछन्, माला लगाउने, आर्शिवाद दिने गरिरहेको छ ।”(रासस)
लकडाउनले बेरोजगार बनेकालाई स्थानीय तहको राहत